၁၄ နာရီအတှငျး ကွညျ့ရှုသူ လေးသနျးကြျောသှားတဲ့ Jurassic World: Fallen Kingdom - Final Trailer
access_time9months ago account_circleEi Ei Mar
ဒိုငျနိုဆောတှကေ ကွောကျစရာအရမျးကောငျးတာ မှနျပမေဲ့ လူတှကေ ပိုပွီး ကွောကျဖို့ကောငျးတယျဆိုတာ Jurassic World: Fallen Kingdom ရဲ့ နမူနာထဲမှာ မွငျတှရေ့ပါတယျ။
Jurassic World ဇာတျလမျးတှထေဲမှာ ကွညျ့လို့ အလနျးဆုံး မွငျကှငျးတှကေို ဒီနမူနာထဲမှာ မွငျတှရေ့ပွီး လူတှကေ ဘာလို့ Jurassic Park ကို ပွနျလာကွတယျဆိုတာကိုလညျး သိရှိလိုကျရပါတယျ။
Blue ဆိုတဲ့ ဒိုငျနိုဆောမလေးက သူတို့မြိုးစိတျထဲမှာ နောကျဆုံးကနျြရှိတဲ့ ဒိုငျနိုဆောတဈကောငျဖွဈပွီး ထရိနျနာ Owen Grady (Chris Pratt) ဟာ သိပ်ပံစမျးသပျမှုတှေ ထပျမံပွုလုပျဖို့အတှကျ Blue ကို ကယျတငျဖို့ တာဝနျပေးခံရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Bule ကို ကယျတငျတာဟာ ယုတျမာတဲ့ အကွံအစညျတှရှေိနတေယျဆိုတာကို Owen တဈယောကျ သိရှိသှားခဲ့တယျ။
ဒိုငျနိုဆောတှကေ အန်တရာယျပေးနိုငျတဲ့အကောငျတှေ ဖွဈပမေဲ့ ယုတျမာပကျစကျတဲ့ ရညျရှယျခကျြတှနေဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ ထိနျးခြုပျမှုခံရခြိနျမှာတော့ အဆပေါငျးမြားစှာ ပိုမို ကွောကျစရာကောငျးလာတာကို မွငျတှရေ့ပါတယျ။
Jurassic World: Fallen Kingdom ရုပျရှငျကားက ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ အရမျးအောငျမွငျခဲ့တဲ့ ဒါရိုကျတာ Colin Trevorrow ရိုကျကူးတဲ့ Jurassic World ရဲ့ နောကျဆကျတှဲ ဇာတျလမျးဖွဈပါတယျ။
ယခုဇာတျကားကိုတော့ J. A. Bayona က ရိုကျကူးထားပွီး Chirs Patt နဲ့ Bryce Dallas Howard တို့ ခေါငျးဆောငျပါဝငျထားတာဖွဈပါတယျ။
ဇှနျလ ၂၂ မှာ ရုံတငျမယျ့ Jurassic World: Fallen Kingdom ကို စိတျဝငျစားသူ မြားပွားလှပွီး နောကျဆုံးထှကျရှိလာတဲ့ နမူနာကို ကွညျ့ရှုသူက ၁၄ နာရီအတှငျးမှာ ၄ သနျးကြျောရှိသှားပွီဖွဈတဲ့အတှကျ လကျမှတျရောငျးခရြမှု စံခြိနျတငျနိုငျမယျ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
ဒိုင်နိုဆောတွေက ကြောက်စရာအရမ်းကောင်းတာ မှန်ပေမဲ့ လူတွေက ပိုပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ Jurassic World: Fallen Kingdom ရဲ့ နမူနာထဲမှာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။
Jurassic World ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ကြည့်လို့ အလန်းဆုံး မြင်ကွင်းတွေကို ဒီနမူနာထဲမှာ မြင်တွေ့ရပြီး လူတွေက ဘာလို့ Jurassic Park ကို ပြန်လာကြတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိရှိလိုက်ရပါတယ်။
Blue ဆိုတဲ့ ဒိုင်နိုဆောမလေးက သူတို့မျိုးစိတ်ထဲမှာ နောက်ဆုံးကျန်ရှိတဲ့ ဒိုင်နိုဆောတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး ထရိန်နာ Owen Grady (Chris Pratt) ဟာ သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုတွေ ထပ်မံပြုလုပ်ဖို့အတွက် Blue ကို ကယ်တင်ဖို့ တာဝန်ပေးခံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Bule ကို ကယ်တင်တာဟာ ယုတ်မာတဲ့ အကြံအစည်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို Owen တစ်ယောက် သိရှိသွားခဲ့တယ်။
ဒိုင်နိုဆောတွေက အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်တွေ ဖြစ်ပေမဲ့ ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုခံရချိန်မှာတော့ အဆပေါင်းများစွာ ပိုမို ကြောက်စရာကောင်းလာတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။
Jurassic World: Fallen Kingdom ရုပ်ရှင်ကားက ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Colin Trevorrow ရိုက်ကူးတဲ့ Jurassic World ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဇာတ်ကားကိုတော့ J. A. Bayona က ရိုက်ကူးထားပြီး Chirs Patt နဲ့ Bryce Dallas Howard တို့ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၂၂ မှာ ရုံတင်မယ့် Jurassic World: Fallen Kingdom ကို စိတ်ဝင်စားသူ များပြားလှပြီး နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ နမူနာကို ကြည့်ရှုသူက ၁၄ နာရီအတွင်းမှာ ၄ သန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မှတ်ရောင်းချရမှု စံချိန်တင်နိုင်မယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။